20-ka Waxyaabo ee ugu Wanaagsan ee aad Maalgelin karto Hadda oo u qalma Lacagtaada - The Wealth Circle
Bogga ugu weyn 20-ka Waxyood ee ugu Wanaagsan ee aad Maalgashi ku Samayn karto Hadda oo Lacagtaada Qiimoheedu Tahay
Isha Sawirka: businessyield.com
Iyadoo cudurka faafa ee coronavirus uu wali burburinayo dhaqaalaha, suuqa saamiyada ayaa mar hore soo kabsaday.
Bartamihii Ogosto, Celceliska Warshadaha Dow Jones iyo S&P 500 labaduba waxay kordheen in ka badan 50% hoos u dhacii Maarso.
Maalgelinta ugu muxaafidka ah, celcelis ahaan, waxay bixiyaan soo celinta ugu hooseysa iyagoo sidoo kale ilaalinaya maalgashigaaga bilowga ah.
Markaad kor u kacdo jaranjarada khatarta ah, waxaad aqbashaa isbeddello badan oo suuqa ah si aad u beddesho suurtagalnimada abaal-marinno waaweyn oo mustaqbalka fog ah. Debaajiga iyo sinnaanta ayaa ah hantida ugu khatarta badan, waxaana ku xiga lacag caddaan ah.
Saamiyada qaybsiga-bixinta, hantida ma-guurtada ah, iyo ganacsiyada ayaa ah dhawr tusaale oo ka mid ah maalgelinta wax-soosaarka sare leh.
Iyadoo maal-gashiyadani ay leeyihiin awood ay ku soo saaraan faa'iido sare, qaar ayaa aad uga ammaan badan kuwa kale. Hadafyadaada maaliyadeed ee dhow iyo kuwa fog, waqtiga, dulqaadka khatarta ah, iyo xadiga lacagta aad hadda bangiga ku haysatid dhamaantood waa in la tixgeliyo marka la go'aaminayo halka iyo sida loo maal galiyo lacagta soo celinta wanaagsan 2021.
Tixgelintan waa in ay fududeeyaan in la go'aamiyo meesha aad lacagtaada ku maalgelinayso si badbaado leh adiga oo weli helaya soo-celinta kuwaas oo kaa caawin doona inaad gaarto yoolalkaaga maaliyadeed iyo abuurista hanti mustaqbalka fog ah.
Baadhid: Sida Loo Maalgeliyo $ 5,000 Sanadka 2022 | Fikradaha Ganacsi ee Ugu Fiican iyo Xeeladaha
Waa maxay Sharaxaadda Maalgelinta Sugan?
Shahaadooyinka deebaajiga (CD-yada), xisaabaadka suuqa lacagta, curaarta dawladda hoose, iyo Sicirrada La-ilaaliyo Sicir-bararka ayaa ah dhammaan fursadaha maalgashi ee sugan (TIPS).
Maalgelinta sida CD-yada iyo xisaabaadka bangiyada waxaa caymis ku leh Shirkadda Caymiska Deposit-ka ee Federaalka (FDIC) ilaa $250,000.
FDIC ayaa kuu soo celin doonta lacagtaada haddii bangigu awoodi waayo inuu dib kuu bixiyo.
Akhri Sidoo kale: Sida Loo Maalgaliyo $ 50k Oo Loo Helo ROI -ga Ugu Fiican | Tusaha Khubarada 2022
Suurtagal ma tahay in la Sameeyo Maal-gelin Khatar-la'aan ah?
Si aad si buuxda u caddaato, ma jirto maalgashi gabi ahaanba khatar la'aan ah. Way adag tahay in la caddeeyo maalgashiga ugu ammaansan sababtoo ah suuqyadu way isbedelaan, dhaqaaluhuna mararka qaarkood waa lama filaan.
Qaybaha maalgashiga qaarkood, dhanka kale, ayaa aad uga ammaan badan kuwa kale.
Waxaa laga yaabaa inaad filayso inaad jebiso xitaa ama aad lumiso qadar yar oo lacag ah iyada oo la adeegsanayo maalgelinta khatarta yar. Maalgelinta khatarta weyn, dhanka kale, waxay keeni kartaa soo-celin aad u sareysa. Way adag tahay in la helo khatar-yar, maal-gashi wax-soo-saar sare leh.
Si kastaba ha ahaatee, iyada oo aan loo eegin meesha aad dooratay inaad dhigto lacagtaada, hubi in faylalkaagu si fiican u kala duwan yahay si loo yareeyo khatartaada guud. Natiijo ahaan, waxaad ka heli doontaa liis ah 20 maalgashi oo sugan oo leh soo-noqosho wanaagsan xagga hoose;
Akhri Sidoo kale: Badbaadinta vs Maalgelinta: Goorta la dooranayo & sida loo Sameeyo
20-ka Waxyood ee ugu Wanaagsan ee aad ku Maalgelin karto Taasi waa Lacag kuu Qalanta
1. Koontada Kaydka Wax-soosaarka Sare
2. Shahaadooyinka dhigaalka
3. Sanduuqa Debaajiga Dawladda
4. Sanduuqa curaarta shirkadda ee muddada-gaaban
5. Sanduuqa curaarta degmada
7. Sanduuqa saamiyada saamiyada
8. Nasdaq - 100 Sanduuqa Index
9. Guryaha Kirada
10. Lacagta 'cryptoptorency'
11. Xisaabaadka Suuqa Lacagaha Wax-soosaarka Sare
12. Securities Treasury
13. Kaydka Kobaca
14. Hantida Maalgelinta Guryaha (REITS)
15. Maalgelinta Tusaha gaarka ah ee warshadaha
16. Kaydka Sicir-bararka ee Hanti-dhowrka
18. Maalgelinta Guryaha Ma-guurtada ah
19. Amaahda Dhig-faca
20. Sanduuqa wadaagga ah
1. Koontada Kaydka Wax-soosaarka Sare:
Koontada kaydka onlaynka ah ee wax soo saarka sare leh ayaa dulsaar ku bixisa hadhaaga lacagta caddaanka ah. Xisaabaadka kaydka internet-ka ee wax soo saarka sare leh, sida koontada kaydka ah ee kasbada lacagta dinaarada ah ee bangigaaga deegaanka, ayaa ah gaadiid si fudud loogu heli karo lacagtaada.
Kharashyada dheeraadka ah ee ka yar awgeed, bangiyada internetka ayaa caadi ahaan bixiya dulsaar aad u sarreeya.
Intaa waxaa dheer, waxaad sida caadiga ah ku heli kartaa lacagaha adiga oo u raraya bangigaaga aasaasiga ah ama kala soo baxa ATM-ka. Koontada kaydku waa doorasho wanaagsan oo loogu talagalay dadka kuwaas oo u baahan doona lacag dhawaan.
Arag sidoo kale: Waa maxay Maalgelinta Mawduuca? Sida ay u Shaqeyso, Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka
Uma baahnid inaad ka walwasho inaad lumiso lacagtaada sababtoo ah bangiyada bixiya xisaabaadkaan waa FDIC-caymis.
Iyadoo xisaabaadka kaydka wax soo saarka sare, sida CD-yada, ay guud ahaan yihiin maalgashiyo sugan, haddii qiimayaashu aad u hooseeyaan, waxaad halis u tahay inaad lumiso awoodda wax iibsiga waqti ka dib sicir bararka awgeed.
Nooca ugu dareeraha badan ee lacagtu waa akoon kayd.
Waxaad ku dari kartaa ama ka saari kartaa lacagaha wakhti kasta, inkastoo bangigaagu uu ku soo rogi karo xaddidaad sharci ah oo ah lix lacag bixin ah wareeggii biilasha haddii ay sidaas doorato.
Hubi Sidoo Kale: Sida Loo Bilaabo Maalgelinta Lacagta Markii Ugu Horreysay
2. Shahaadooyinka dhigaalka:
Shahaadooyinka dhigaalka, ama CD-yada, waxaa bixiya bangiyada waxayna bixiyaan dulsaar ka sarreeya xisaabaadka kaydka. Qaangaadhka wakhtiga dhigaalka ee dawlada dhexe ay caymisisay waxay u dhaxaysaa dhawr maalmood ilaa dhawr sano.
Waxa kaliya oo aad kala bixi kartaa lacagta marka wakhti go'an uu dhaafo maadaama ay yihiin "waqti dhigaal."
Hay'adda maaliyadeed waxay ku siinaysaa dulsaar CD-ga waqtiyo go'an. Markay bislaato, waxaad heli doontaa maamulahaaga bilowga ah iyo wixii dulsaar ah ee soo kordhay.
CD-yada waxaa loo arkaa maalgashi aan khatar lahayn. Si kastaba ha ahaatee, waxay la yimaadaan khatarta dib-u-maalgelinta, taas oo macnaheedu yahay haddii heerka dulsaarka hoos u dhaco, maalgashadayaasha waxay heli doonaan wax ka yar marka ay dib u maalgeliyaan raasumaalka iyo ribada CD-yada cusub ee leh heerarka hoose, sida aan ku aragnay 2020.
Walaaca ayaa ah in qiimayaasha laga yaabo inay kor u kacaan, laakiin maalgashadayaasha ma awoodi doonaan inay ka faa'iidaystaan ​​sababtoo ah lacagtooda ayaa mar hore ku xayiran CD.
CD-yadu way ka dareere yar yihiin kaydka ama xisaabaadka suuqa lacagta maadaama ay ku xidhaan lacagahaaga ilaa CD-gu ka bisleeyo, kaas oo qaadan kara bilo ama sannado.
Waa suurtogal in aad lacagtaada si degdeg ah u soo ururiso, laakiin had iyo jeer waxa aad bixinaysaa ganaax.
3. Lacagaha Debaadhka Dawladda:
Sanduuqa curaarta dawladu waa sanduuqa la wadaago ama sanduuqa sarrifka-ganacsiga ee maalgeliya dawladda iyo qalabka deynta.
Lacagaha waxaa lagu maalgeliyaa qalabyada deynta ee ay bixiyaan ganacsiyada ay dowladdu maalgeliso, sida T-biil, T-notes, T-bonds, iyo dammaanadaha ay taageerto mortgage.
Lacagahan dammaanadda ah ee dawladdu waxay ku habboon yihiin maalgashadayaasha khatarta yar, iyo sidoo kale maalgashadayaasha cusub iyo kuwa raadinaya dakhli joogto ah.
Sababtoo ah curaarta waxaa lagu taageeray deynta dowladda, lacagaha lagu maalgeliyo qalabka deynta dowladda waxaa loo arkaa inay ka mid yihiin hantida ugu badbaadsan.
Sanduuqa, sida maalgelinta kale ee wadaagga ah, maaha mid ay taageerto dawladda sidaas darteed waxay u nugul tahay khataraha sida isbeddelka heerka dulsaarka iyo sicir-bararka.
Haddii sicir-bararku kordho, awoodda wax iibsiga ayaa hoos u dhacda; haddii dulsaarku kor u kaco, qiimaha curaarta ee jira ayaa hoos u dhacaya; iyo haddii dulsaarku hoos u dhaco, qiimaha curaarta hadda jira ayaa kor u kacaya. Dammaanadaha muddada-dheer waxay wataan khatar sare oo dulsaar ah.
Kaydka sanduuqa dammaanadda waa dareere aad u dareere ah, laakiin qiimahoodu waxa uu la beddelaa heerka dulsaarka.
4. Sanduuqa curaarta shirkadda ee muddada-gaaban:
Shirkaduhu waxay ururin karaan lacag iyagoo ka iibinaya curaarta maalgashadayaasha, ka dibna lagu biirin karo sanduuqa dammaanadda oo leh curaarta shirkado kala duwan.
Dammaanadaha muddada-gaaban waxay leeyihiin celcelis ahaan muddo qaan-gaar ah, oo ah 1 - 5 sano, taasoo ka dhigaysa inay u nugul yihiin isbedbeddelka heerka dulsaarka.
Si la mid ah lacagaha kale ee debaajiga, lacagaha dammaanadda-gaaban ee shirkadda laguma xafido Shirkadda Caymiska Deposit Federal (FDIC).
Maalgashadayaasha maalgelinta-fasalka curaarta muddada-gaaban waxay inta badan kasbadaan soo-celin ka badan kuwa ku jira sanduuqa curaarta dawladda iyo dawladda hoose.
Waxaad iibsan kartaa oo iibin kartaa saamiyada sanduuqa maalin kasta oo ganacsi. Intaa waxaa dheer, waxaad caadi ahaan dib u maalgelin kartaa qaybinta dakhliga ama waxaad samayn kartaa hanti cusub wakhti kasta.
Kaliya maskaxda ku hay in ay jirto fursad aad ku waayi doonto lacag.
5. Lacagaha debaajiga ee dawladda hoose:
Maalgelinta debaajiga degmada waxay ku maalgelisaa curaarta degmada ee kala duwan (sidoo kale loo yaqaan munis) oo ay bixiyaan dawladaha hoose iyo gobolka.
Dulsaarka la kasbaday caadi ahaan waa canshuur la'aan heer federaal ah waxaana sidoo kale laga yaabaa inuu canshuur la'aan yahay heerarka gobolka iyo degmada, taasoo ka dhigaysa mid si gaar ah loogu jecel yahay maalgashadayaasha gobollada canshuurta sare leh ama marinnada. Dammaanadaha Muni shaqsiga ah, maalgelinta wadaagga ah, iyo lacagaha la kala beddelo waa kuwo la iibsan karo.
Waxaad la shaqayn kartaa la-taliye maaliyadeed si uu u go'aamiyo nooca maalgashiga ugu fiican ee adiga, inkastoo laga yaabo inaad rabto inaad la sii wado kuwa gobolkaaga ama gobolkaaga faa'iidooyinka canshuurta.
curaarta shaqsiga ah waxay ku xiran tahay khatarta aan caadiga ahayn, taas oo macnaheedu yahay in soo saaraha aanu awoodi doonin inuu sameeyo dulsaarka mustaqbalka ama lacagaha aasaasiga ah.
Magaalooyinka iyo gobolada inta badan ma kiciyaan, laakiin way dhacdaa, curaarta muni taariikh ahaan waxay ahayd mid amaan ah.
Debaajiga sidoo kale waxaa lagu bixin karaa dalabaad, taasoo la macno ah soosaaruhu inuu soo celiyo maamulaha oo uu ka fariisto curaarta ka hor xilliga qaan-gaarka.
Natiijo ahaan, maal-galiyuhu wuxuu waayi doonaa kharashyada dulsaarka mustaqbalka.
Maalin kasta oo shaqo, waxaad iibsan kartaa ama iibin kartaa saamiyadaada sanduuqa. Intaa waxaa dheer, waxaad caadi ahaan dib u maalgelin kartaa qaybinta dakhliga ama waxaad samayn kartaa hanti cusub wakhti kasta.
Haddii aad rabto inaad gaarto soo celin sare, sanduuqa S&P 500 waa bedelka weyn ee badeecooyinka bangiyada dhaqameed ama curaarta, in kasta oo ay la timaado hubanti la'aan badan.
Sanduuqa waxa uu ka kooban yahay ku dhawaad ​​500 oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn Maraykanka, kaas oo ka kooban shirkado badan oo adduunka ugu guulaha badan.
Laba ka mid ah xubnaha tusmada ugu cajiibsan, tusaale ahaan, waa Amazon iyo Berkshire Hathaway.
Sanduuqa tusmada S&P 500, sida sanduuq kasta oo kale, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si dhakhso leh u kala duwanaato adigoo haysta qayb ka mid ah shirkadahaas. Sanduuqa ayaa ka adkeysi badan maal-gashiyo kale oo badan sababtoo ah waxay maalgelisaa shirkado ka socda dhammaan warshadaha.
Muddo ka dib, tusmada ayaa celcelis ahaan 10% soo laabatay sannadkii. Sanduuqa tusmooyinkani waxay leeyihiin saamiyo kharash yar (qadarka ay ku kacayso shirkadda maaraynta si ay u maamusho sanduuqa) waxayna ka mid yihiin ikhtiyaarka ugu fiican ee la heli karo.
Sababtoo ah waxay ka kooban tahay shirkadaha ugu sarreeya suuqa oo aad u kala duwan, iyo S & P 500 fund waa mid ka mid ah hababka nabdoon ee lagu maalgeliyo sinnaan la'aanta.
Dabcan, sababtoo ah kaydka ayaa wali ku jira, waxay noqon doonaan kuwo aad u kacsan marka loo eego curaarta ama alaabta bangiga. Sidoo kale caymis kuma leh dawladdu, sidaas awgeed waxa suurtogal ah in lacag lagu waayo isbeddelka suuqa.
Tusuhu, dhanka kale, si cajiib ah ayuu u soo bandhigay waqti ka dib.
Sanduuqa tusmada S&P 500 waa mid dareere ah, maalgashadayaashana way iibsan karaan ama iibin karaan maalin kasta oo ganacsi.
7. Lacagaha Saamiyada Qaybsiga:
Saamiyada qaybsiga-bixinta ayaa laga yaabaa inay ka dhigaan maalgashigaaga suuqa saamiyada wax yar oo badbaado leh.
Asal ahaan, Qaybintu waa cadad faa'iido shirkadeed oo loo qaybin karo saamilayda si joogto ah, badiyaa saddexdii biloodba mar.
Iibka saamiyada shakhsi ahaaneed, iyada oo aan loo eegin in ay bixiyaan saami qaybsiga iyo in kale, ayaa ku habboon maalgashadayaasha aasaasiga ah iyo kuwa horumarsan. Si kastaba ha ahaatee, waad iibsan kartaa koox iyaga ka mid ah.
Saamiyada qaybsiga, sida maalgelinta saamiyada kale, waxay xambaarsan tahay khatar. Waxaa loo arkaa inay ka ammaan badan yihiin shirkadaha kobaca ama sinnaanta lacag bixinta kale ee aan qaybsanayn, laakiin waa inaad si xikmad leh ugu doorataa faylalkaaga.
Maalgelinta shirkadaha leh rikoorka korodhka saami qaybsiga halkii aad ka ahaan lahayd kuwa leh wax-soosaarka ugu sarreeya hadda. Taasi waxay muujin kartaa khatar soo socota.
Si kastaba ha noqotee, xitaa shirkadaha si fiican loo tixgeliyo waxay yeelan karaan dhibaatooyin dhaqaale, sidaas darteed sumcadda sare maahan dammaanad qaadka in shirkadu aysan hoos u dhigi doonin ama aysan baabi'in doonin saamigeeda.
Maalin kasta oo uu suuqu furmo, waad iibsan kartaa oo iibin kartaa sanduuqaaga, saami qaybsiga saddexdii biloodba mar waa dareere.
Maalgelin wakhti dheer ah ayaa lagama maarmaan u ah si aad u hesho soo celinta ugu badan ee maalgashiga saami qaybsiga. Si aad u hesho soo-celinta ugu fiican ee saami-qaybsigaaga, waa inaad dib u gelisaa.
8. Nasdaq - 100 Sanduuqa Tusaha:
Maalgashadayaasha doonaya inay galaan qaar ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn uguna tignoolajiyada iyaga oo aan dooran kuwa guulaysta iyo kuwa khasaaray ama qiimeeya shirkado gaar ah waxay tixgelin karaan sanduuqa tusmada ee ku saleysan Nasdaq-100.
Nasdaq 100-ka ganacsi ee ugu sarreeya waxay ka mid yihiin kuwa ugu waxtarka badan uguna xasilloon adduunka, maalgelintuna waxay ku saleysan tahay iyaga. Apple iyo Facebook waa laba shirkadood oo noocaas ah, mid kastaa wuxuu ku xisaabtamayaa qayb weyn oo ka mid ah tusmooyinka.
Shirkad kale oo caan ah oo xubin ka ah waa Microsoft. Sanduuqa tusaha ee Nasdaq-100 wuxuu bixiyaa kala duwanaansho degdeg ah, iyadoo hubinaysa in maalgashigaagu aanu waxyeello u geysan fashilka hal shirkad.
Kooxdan kaydka ah, sida kaydka kale ee si guud loo iibiyo, waxa laga yaabaa inay ku dhacaan qiimo. Halka Nasdaq-100 ay leedahay qaar ka mid ah ganacsiyada IT-ga ugu awoodda badan, waxay sidoo kale ka mid yihiin kuwa ugu qiimaha badan.
Waxay u badan tahay inay si degdeg ah ugu dhacaan hoos u dhac sababtoo ah qiimeyntooda sare, inkastoo laga yaabo inay dib u soo kacaan inta lagu jiro isbeddelka.
Sanduuqa tusmada Nasdaq, sida miisaaniyadaha kale ee liiska dadweynaha, waxaa loo rogi karaa lacag caddaan ah maalin kasta oo ganacsi.
9. Guryaha Kirada:
Guryaha kirada ah waxay noqon karaan maalgashi weyn haddii aad diyaar u tahay inaad maamusho guryahaaga.
Marka la eego qiimaha amaahda guryaha ee hoos u dhaca taariikhiga ah, hadda waxay noqon kartaa wakhti ku habboon in la maalgeliyo iibsashada guri cusub, in kasta oo dhaqaalaha aan la saadaalin karin uu ka dhigi karo mid aad u adag, iyo kiraystayaasha ayaa laga yaabaa inay aad ugu dhowdahay inay ku fashilmaan shaqo la'aanta, iyada oo ay ku adagtahay in la maareeyo. .
Waxaad u baahan doontaa inaad doorato hantida saxda ah, maalgeliso ama si toos ah u iibsatid, ilaaliso, oo aad la macaamilto kiraystayaasha haddii aad jidkan marayso.
Sida hanti kasta oo kale oo go'an, guryeynta waa la qiimeyn karaa, sida maalgashadayaasha ay ogaadeen. In kasta oo ay jiraan dhibaatooyin xagga dhaqaalaha ah, qiimaha guryuhu waxa uu kacay 2020 iyo 2021 taas oo ay ugu wacan tahay heerarka amaahda guryaha oo hooseeya iyo sahayda guryaha oo kooban.
Oo haddii aad waligaa si degdeg ah ugu baahan tahay lacag caddaan ah, lacag-bixin la'aanta waxay keeni kartaa dhibaato. Waxaa laga yaabaa inaad la timaado lacag aad u badan haddii aad u baahan tahay habka saqafka ama qaboojiyaha.
Waxaad galaysaa khatarta ah in hantidu ay faaruq noqoto inta aad ku dheggan tahay bixinta amaahda guryaha.
Guryaha kirada ah waa mid ka mid ah maalgelinta dareeraha ah ee ugu yar ee la heli karo, markaa haddii aad si degdeg ah ugu baahan tahay lacag caddaan ah, waxaa laga yaabaa inaanay ahayn doorashada ugu fiican (in kasta oo lacag caddaan ah ama deyn guri guri ay suurtogal tahay).
Dallaalku waxa uu ka jari karaa ilaa 6% korka qiimaha iibka komishan ahaan haddii aad iibiso.
Lacagta cryptocurrency waa nooc ka mid ah lacagta dhijitaalka ah ee elegtarooniga ah oo loo isticmaali karo qaab lacag-bixineed. Tobankii sano ee la soo dhaafay, waxay ku kortay caan, iyadoo Bitcoin ay noqotay lacagta dhijitaalka ah ee loogu isticmaalka badan yahay.
Sanadihii la soo dhaafay, cryptocurrency waxay noqotay maalgashi caan ah, iyada oo maalgashadayaasha ay lacag ku shubayaan suuqa, kor u kaca qiimaha iyo soo jiidashada xitaa ganacsato badan.
Bitcoin waa lacagta ugu badan ee loo isticmaalo cryptocurrency, qiimihiisana aad buu isu bedbedlaa, oo soo jiita ganacsato badan.
Si ka duwan hantida kale ee halkan ku taxan, ma taageerto FDIC ama hay'adda lacag-abuurista ee dawlad ama shirkad. Qiimaha ay ku fadhido gabi ahaan waxaa lagu go'aamiyaa qiimaha ay iibsadayaashu rabaan inay ku bixiyaan.
Cryptocurrecy waxaa ka buuxa khataro, oo ay ku jiraan kuwa laga yaabo inay lacag gaar ah ka dhigaan mid aan qiimo lahayn, sida sharci darro.
Lacagaha dhijitaalka ah aad ayay u kacsan yihiin, qiimahooduna si aad ah ayay isu bedbeddeshaan xitaa waqtiyada gaaban, taas oo ku xidhan waxa ganacsatadu ay rabaan inay bixiyaan.
Marka la eego xatooyo caan ah oo dhawaanahan dhacay, ganacsatadu waxay sidoo kale halis ugu jiraan in la jabsado. Oo, haddii aad maal-gelinayso cryptocurrencies, waa inaad ogaataa kuwa ku guulaysta inay ku sii jiraan suuqa halkaas oo qaar badani ay gabi ahaanba lumin karaan.
Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrencies', gaar ahaan kuwa ugu waaweyn sida Bitcoin iyo Ethereum, guud ahaan waa dareere, waxaadna iibsan kartaa oo iibin kartaa wakhti kasta oo maalinta ah.
Si kastaba ha ahaatee, kharashyada korkooda ah ayaa caadi ahaan aad u sarreeya (marka la barbardhigo maalgashiga dhaqameed sida saamiyada), waxaadna u baahan doontaa inaad aragto kobac weyn oo kaliya si aad u jebiso xitaa. Si loo dhimo khidmadahan, waa muhiim in la doorto dallaalka ugu fiican.
11. Xisaabaadka Suuqa Lacagta Waxsoosaarka Sarreysa:
MMA-yada ceymiska FDIC, sida kaydinta, waa mid ka mid ah siyaabaha ugu khatarta yar ee lacagta lagu maalgeliyo.
Awoodda lagu qori karo tiro go'an oo jeeg ah bil kasta ayaa ah farqiga weyn. Xisaabaadka suuqa lacagta, celcelis ahaan, waxay bixiyaan dulsaar ka sarreeya xisaabaadka kaydka.
Shirkadda Caymiska Deposit-ka ee Federaalka (FDIC) waxay caymisaa ilaa $250,000 bangi iyo qof kasta. Natiijo ahaan, haddii aad leedahay xisaabaadyo badan oo leh dheelitir isku dhafan oo ka sarreeya xadka, lacagtaada lama ilaaliyo.
Waxay leeyihiin dareere badan, qaarkoodna waxay kuu ogolaanayaan inaad gasho akoontiga jeegag ama kaarka deynta. Sababtoo ah MMA-yadu waxay bixin karaan dulsaar heersare ah, waxay macno samaynaysaa in la isticmaalo.
12. Securities-ka Khasnada:
Securyyada khasnadda ayaa la mid ah xisaabaadka bangiyada FDIC-ay caymis ku jirto taas oo ay si buuxda u taageerto dawladda. Dawladdu waxay soo saartaa kuwan si ay u ururiso lacag loogu talagalay hindisayaasha iyo dib u bixinta deynta.
Khasnadaha ayaa u shaqayn doona si la mid ah CD-yada in ay yeelan doonaan dulsaar go'an iyo taariikhda qaan-gaadhka, taas oo noqon karta wax kasta oo u dhexeeya hal bil ilaa 30 sano.
Waxaad ka heli doontaa “kuubannada” xilliyeedka ama lacag -bixinnada dulsaarka inta lagu jiro xilliga maalgashiga, iyo sidoo kale dhammaan lacagta asaasiga ah marka dammaanaddu bislaato. Kuwani waa qaar ka mid ah maalgashiyada ugu ammaansan ee la heli karo.
Waxaa muhiim ah in la xasuusto in aadan ka heli karin lacagtaada curaarta dowladda ka hor inta aysan qaan gaarin, xitaa haddii aad lacag bixiso. Si kastaba ha ahaatee, waxaad isku dayi kartaa inaad hesho lacagtaada adigoo ku iibinaya curaarta suuqa sare.
13. Kaydka Kobaca:
Halkii la maalgelin lahaa hal ganacsi oo kobcin ah, maaliyadaha kaydka kobcinta waxay maalgashadaan xulasho ballaaran oo kaydka kobaca ah. Natiijo ahaan, fursadda hal keyd koritaan ah oo dhaca oo waxyeello u geysta faylalkaaga oo dhan waa la dhimay.
Muddada dheer, kaydka kobaca ayaa ka sarreeya inta kale ee suuqa saamiyada. Qaar badan oo ka mid ah ganacsiyada IT-ga ee si degdeg ah u koraya ayaa bixiya fursadaha saamiyada kobaca, laakiin si ka duwan saamiyada saamiyada, dhif ayay u soo celiyaan lacag caddaan ah maalgashadayaasha.
Hase yeeshe, ganacsiyada intooda badani waxay doortaan inay dib u maalgeliyaan faa'iidadooda si ay u sii wadaan horumarinta. Qiimaynta kaydka kobaca shakhsi ahaaneed iyo xulashada lagama maarmaan ma aha miisaaniyada kaydka koritaanka.
Taa beddelkeeda, lacagtaada waxaa lagu maalgeliyaa ururinta kala duwan ee sinnaanta koritaanka kuwaas oo ay si firfircoon u maamulaan maareeyayaal xirfad leh.
Maskaxda ku hay in nooc kasta oo ka mid ah maalgashiga suuqa saamiyada ay keenayso xoogaa khatar ah. Isticmaalka xirfadle, dhinaca kale, waa in ay yareeyaan khatarta iibsashada kayd koritaan xun.
Maalgelintan ayaa sidoo kale ah mid aad u dareere ah, taas oo u oggolaanaysa maalgashadayaasha inay si fudud lacag ugu guuraan oo uga baxaan.
14. Hantida Maalgelinta Guryaha Ma-guurtada ah (REITs):
REITs waa aaminaado maalgashi oo hanti ma-guurto ah leh oo maamula guryaha. Suuqa REIT waxa uu u qaybsan yahay dhawr qaybood oo ay maalgashadayaasha ka soo xulan karaan.
Housing REITs, REITs-ganacsiyeedka, REITs tafaariiqda, iyo hudheelada REITs waa dhammaan qaybaha caanka ah.
Maalgelinta REIT oo si guud loogaga gado suuqyada waaweyn halkii laga heli lahaa fund gaar ah waa khamaar ammaan badan. Halkii aad ka raadin lahayd miisaaniyad soo celinta ugu fiican ee hadda, raadi REITs oo leh taariikh dheer oo saami qaybsi sii kordhaya.
Lacagta caddaanka ah ee REIT waa lagala bixi karaa wakhti kasta oo suuqa saamiyada uu firfircoon yahay.
15. Sanduuqa Tusaha Warshadaha-gaarka ah:
Maalgashadayaashu waxay dooran karaan qayb ay maalgashadaan halkii ay qiimayn lahaayeen shirkado gaar ah oo ku jira qaybtaas oo leh miisaaniyada tusmada gaarka ah ee warshadaha.
Tani waxay inta badan u tahay maalgashadayaasha kuwaas oo u heellan warshad gaar ah oo doonaya inay faafiyaan khatarta iyaga oo aan cilmi-baaris ku sameynin shirkado gaar ah; bilawga iyo maalgashadayaasha horumarsan.
Haddii warshadaha aad maal-gashanayso ay si fiican u qabato, maaliyadda guud waxay u badan tahay inay sidoo kale si fiican u qabato. Dhanka kale, haddii mid ka mid ah warshadaha ay dhibaato soo gaarto, inta badan ama dhammaan shirkadaheeda ayaa sidoo kale dhibi doona.
Natiijo ahaan, qiimaha kala-duwanaanshaha sanduuqa waa la dhimaa.
Maalin kasta oo suuqu furmo, lacag caddaan ah ayaa la soo celin karaa.
16. Sicir-bararka Khasnadda-qasnjiga ah ee la ilaaliyo:
TIPS waxay bixisaa soo celin yar, laakiin qaddarka ugu muhiimsan ee la geliyey ayaa kordhin doona ama hoos u dhigi doona qiimaha iyadoo lagu saleynayo sicir bararka inta lagu jiro nolosha curaarta.
Kuwani waxay ku habboon yihiin lacag caddaan ah oo aadan u baahnayn ka hor taariikhda qaan-gaarka ee curaarta; lacagaha ka baxsan FDIC-caymiska ugu badan oo ah $250,000; iyo maalgashadayaasha aan doonayn inay ka werweraan sicir-bararka khatarta ku jirta faylalka ay ku jiraan.
TIPS waa maalgashi halis yar oo kor u kaca oo hoos ugu dhaca sicir bararka. Sidaa darteed, haddii sicir-bararka uu sare u kaco, qiimaha lacagtaadu waa sidaas oo kale.
In kasta oo soo-celintaadu ay yar tahay marka la barbar dhigo maalgashiga khatarta sare leh, lacagtaadu waxay ahaan doontaa heerka sicir-bararka.
Haddii aad wax iibiso ka hor taariikhda qaan -gaadhnimada, sida khasnadaha kale, hubaal khatartaadu way kordhaysaa.
Annuities waxay ku timaaddaa qaabab iyo cabbirro kala duwan, laakiin dhammaantood waxay ku lug leeyihiin macaamil ganacsi bixiyaha caymiska.
Shirkadda caymisku waxay aqbashaa lacag-bixin hal mar ah oo ay ku beddesho qaddar la hubo oo soo celin ah.
Sannadlaha go'an (oo leh qaddar go'an oo soo noqosho ah) iyo macaashka doorsoomayaasha (oo leh xaddiga soo noqoshada) waa laba nooc oo macaash (oo leh heerka soo noqoshada qayb ahaan ay go'aamiso caafimaadka suuqa saamiyada).
Markaad hesho soo celin dammaanad ah, waxaad ogaanaysaa inaad samaynayso maalgashi sugan. Annuities, sida dawladda dhexe, waxaa taageera shirkadda caymiska oo haya macaashka.
Khatarta amaahda (khatarta ah in caymisku uu kici doono), Khatarta awoodda iibka (khatarta ah in sicir-bararka uu ka sarre mari doono heerka go'an ee sannadlaha), iyo khatarta dareeraha ah ayaa ah dhowr khatarood oo ay la kulmaan dakhliyada (khatarta ah in lacagaha lagu xidho ilaa sanado leh awood yar oo ay ku galaan iyaga).
Inta badan dakhli-ururinta ayaa leh mudnaanta ugu badan ee ka-noqoshada sannadkii, taas oo inta badan ah 10%.
Haddii xubintu ka baxdo in ka badan qaddarkan, shirkadda caymisku waxay ku dallaci kharash is-dhiibida muddo loo yaqaan "muddada is-dhiibida." Ka dib marka ay dhamaato muddada is-dhiibida, dakhligu waa dareere buuxa.
18. Maalgelinta Guryaha Ma-guurtada ah:
Crowdfunding waa farsamo cusub oo lagu maalgeliyo noocyo kala duwan oo hanti ma-guurto ah.
Hantidhawrka hantida maguurtada ah ee ugu wanagsan waxay isu ururiyaan maalgelinta maalgashadayaasha si ay saami uga helaan hal ama kabadan mashruucyo. Waa hab fantastik ah oo lagu guran karo dhammaan faa'iidooyinka lahaanshaha hantida ma-guurtada ah iyada oo aan loo baahnayn in la ilaaliyo ama la maareeyo hantida.
Shirkadaha wax-ku-oolnimada leh ee wax-ku-oolka ah waxay leeyihiin rikoodh wanaagsan oo ah samaynta maalgelinta khatarta yar ee meelaha la jecel yahay iyo suuqyada kor u kaca, sida guryaha hal qoys ah ama dhismayaal dabaq ah.
Habkan maalgelinta ayaa hoos u dhigaya khatarta iyada oo la kordhinayo saadaalinta, taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah maalgashiga ugu hooseeya ee khatarta hooseeya ee la heli karo, ma aha muran, ma jiraan faa'iido dammaanad ah, sida suuqa saamiyada, waxaadna waayi kartaa dhammaan maalgashigaaga.
Si ka duwan suuqa saamiyada, maalgashigaagu waxa uu xidhnaan karaa sanado iyadoo ku xidhan hantida.
19. Amaahinta fac-wadaaga:
Maalgashadayaashu waxay lacagtooda ku amaahin karaan kuwa kale iyaga oo u maraaya amaahda asaaga ah. Soo celinta maalgashiga noocan oo kale ah, oo mararka qaarkood loo yaqaan ' crowdfunding', ayaa ka timaadda dulsaarka la kasbaday inta lagu jiro nolosha amaahda.
Dadku waxay isku amaahinayeen lacag da'da.
Amaahinta fac-wadaaga ah waa sida ay u egtahay: maal-galiyuhu wuxuu amaahiyaa lacagtiisa ama keeda deyn-qaade isagoo fahamsan in deynta dib loo siin doono deyn-bixiyuhu, oo lagu daray dulsaar, muddo go'an.
Heerarka amaahda P2P way kala duwan yihiin iyadoo ku xiran khatarta la dareemayo, sicir bararka la saadaaliyay, iyo dhererka deynta.
Amaahinta P2P waxaa loo arkaa khatar hoose, fursad maalgashi oo soo-noqosho sare leh. Iyadoo amaahintu ay kaa caawin karto inaad kala duwanaato faylalkaaga maaliyadeed, maskaxda ku hay in deymahani yihiin kuwo aan la hubin.
Natiijo ahaan, haddii deyn-bixiyuhu ku guuldareysto deyntiisa, waxaa laga yaabaa inay hoos u dhigto faa'iidadaada. Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in deyn kasta ay la timaado khatar gaar ah, taasoo kuu ogolaaneysa inaad doorato inta khatarta ah ee aad rabto inaad qaadato.
Amaahda P2P waa dareere ka badan maalgashiga hantida maguurtada ah, laakiin maaha dareere sida kaydka. Waxaad haysataa ikhtiyaarka ah inaad ku iibiso deyntaada suuqa sare oo aad kala baxdo lacagahaaga wakhti kasta.
20. Lacagaha isweydaarsiga:
Sanduuqa wadaagga ahi waa gaadiid ay maalgashadayaasha ku ururiyaan lacagtooda si ay u iibsadaan kaydka, curaarta, iyo hantida kale.
Lacagahani waxay bixiyaan ikhtiyaar ka jaban si aad uga ilaaliso faylalkaaga luminta hal maalgashi. Maalgelinta wadaagga ahi waxay u ogolaataa maalgashadayaasha inay maalgashadaan shirkado kala duwan oo buuxiya shuruudaha qaarkood.
Ganacsiyadani waxay noqon karaan qaybta tignoolajiyada ama waxay noqon karaan shirkado saami-qaybsi bixiya. Maalgelinta wadaagga ah waxay u ogolaataa maalgashadayaasha inay diiradda saaraan aag maalgashi oo gaar ah iyadoo loo qaybinayo khatarta maalgashi badan.
Tani waxay ku dhacdaa miisaaniyada wadaagga ah sababtoo ah waxay maalgashadaan badeecooyin maaliyadeed oo kala duwan, oo ay ku jiraan sinnaanta, deynta, curaarta shirkadaha, dammaanadaha dawladda, iyo wixii la mid ah.
Sababtoo ah doorsoomayaal kala duwan, qiimaha qalabkani wuu isbedelaa, taasoo keeni karta khasaare.
Lacagta sanduuqa wadaagga ah si weyn ayaa loo heli karaa, laakiin waxay qaadataa deebaaji yar oo bilaw ah, oo u dhaxaysa $ 500 ilaa boqollaal doolar.
Waa maxay maalgashiga ugu nabdoon uguna faa'iidada badan?
Koontada kaydka oo leh waxsoosaar sare.
Waa maxay maalgashiga ugu faa'iidada badan?
Xisaabaadka Suuqa Lacagta iyo Shahaadooyinka Debaajiga
Maalgelintee ayaa ugu badbaadsan waayeelka?
Dammaanadaha ay bixiso Waaxda Maaliyadda
Waa maxay maalgashiga ugu ammaansan ee loogu talagalay maalgalinta hawlgabkaaga?
In kasta oo aanay jirin maalgashi gabi ahaanba aan khatar lahayn, waxa jira shan loo tixgaliyo in ay yihiin kuwa ugu badbaado badan in la yeesho (Akoonada kaydka bangiyada, CD-yada, kaydka khasnadda, xisaabaadka suuqa lacagta, iyo dakhliyada go'an).
Waa maxay dariiqooyinka ugu fiican ee aan lacagtayda si caqli gal ah u gelin karo?
Bilow maalgelinta isla marka aad bilowdo inaad hesho xoogaa lacag ah.
Lacag meel u dhig hadafyada dhow.
Maalgeli lacag si aad u gaarto ujeedooyinkaaga.
Markaad go'aaminayso waxa aad ku maalgelinayso, waa inaad ka fikirtaa dulqaadkaaga khatarta ah, wakhtiga fog, fahamka maalgashiga, xaalada maaliyadeed, iyo qadarka lacagta aad haysato.
Haddii aad rabto inaad kordhiso hantidaada, waxaad haysataa laba ikhtiyaar: Maalgelinta khatarta hoose leh ee soo noqoshada yar ama maalgelinta khatarta sare leh oo soo noqoshada sare leh.
Marka ay timaado maalgashiga, waxaa badanaa jira is-dhaafsi u dhexeeya khatarta iyo abaalmarinta.
Waxa kale oo aad qaadan kartaa istaraatiijiyad dheeli tiran, adigoo haysta maalgelin lacag badbaado leh adigoo weli u oggolaanaya korriinka muddada dheer, maaddaama tani ay tahay mid ka mid ah xeeladaha ugu fiican ee lagu ilaaliyo laguna kordhiyo lacagtaada si aad u abuurto hanti waara.
Sida Lacagta loogala baxo ATM-ka Iyadoo aan lahayn lambar sir ah | Hagaha buuxa